11/11/2008: Submitted for publication via web
"Alliwa": Wargeys 50 Guuradiisii Ay Maanta Tahay - Labaad
Waxaa isna joogta ahaa oo tirsi kasta kasoo bixi jirey, tiiryar (column) Cinwaankiisu ahaan jirey Khabarun Wa Tacliiq, War Iyo faallo oo uu tifatirku ku falaqayn jirey, wararka 7-aadka ka ugu mihiimsan ama ugu muddan xusuusta. Warkaasi wuxuu noqon kareyey mid laxamiya ama mid caalami ah. Waxaa isna ka mid ahaa qoraalada sii muuqata u soo bixi jiray All-iwa,"Xadiith -Ul-Madiina", Sheekada magaalada oo uu tifatirku kutaataaban jirey mawduuca magaaladu 7-aadkaa aad uga sheekeysato.
Wargeyskan ay 50 sanno ka soo wareegeen dhalashadiisii, muddo 5sano ku dhow soo baxayey wuxuu caan ku ahaa oo uu dheeraa wargeysyadii gadaashii soo baxay, xayeysiis iyo Iidhe, kusoo bixi jirray, 7-aadkasta bogagiisa qaar; kuwaas alaabtaa la xayaysiinayo oo ay lahaayeen shariikado caalami ahi waxaa ka mid ahaa saabuuno kala duwan, sida LUX, Lifeboy, Tide iyo Surf . Waxa kalee oo ka mid ahaa teebka loo yaqaano Imperial Sanky Sheldon oo ah qalabka xafiisyada, Aspro, Aspiin iyo Clark Shoes , tusaala ahaan alaabtaa la xayeysiinayo qaarkood wakaaladooda waxaa haystay shariikadan lahayd horseed Printing Press iyo Ganacsigii kalee garab socday .
Wargeyskaa All-wa ma ahayn wargeys ganacsi oo laga fillo inuu is bixiyo amma laga helo macaash. Sida runtu tahay kharashka ku baxa soosaarkiisa, qoraal, waraaq, khad iyo farsamaba waxaa dabooli jirey shariikadii lahayd. Hadii laga tegiwaayo waxa kasoo baxa xayeysiiska ayaa kharashka soo saarka qayb dabooli jiray. Tirada ladaabacaa, intey ahayd inkastoo aanan xusuusneyn, haddey wada iibsanto oo ay lacagteeduna soo wada noqoto, wax sidaa u sii ridan mey ahayn . Waayo? Xabadii waxaa la siin jiri 50 centi (nus shillin). Ujeedada soosaarka wargeyskani waxay ahayd in si deeqsima ah looga qaybgalo hawlgalkii loogu jirrey xoreynta dalka dhinaca wacyigelinta. Sidaasaaney u ahayn mashruuc ganacsi.
Waxyaabaha aan xasuusto ee qofkii arkaba farxad gellin jirey, waxaa ka mid ahaa, markaan arko, dhawr qof oo makhaayad fadhiya, arday yarina u akhriyayo una macneynayo wixii ku qoraa wargeyska. Dabcan ardaygu bilaash wax kuma akhriyeyne nusa saacihiisa ayaa la siiyey. Arrintaasi waxay sawireysay dadku siduu warka uugu ooman yahay iyo heerka barashada afcarabigu ay gaadhsiisneyd markaa dugsiyadeena.